Markaad qoreyso sheekada noloshaada, ha u oggolaan qof kale inuu qalinka hayo. - Harley Davidson - xigasho Pedia
Noloshu waa qaali. Waa muhiim inaan ka faa'iideysano wax kasta oo ka mid ah. Wixii soo kordha iyo wixii ka soo kordhaba, waa inaan xasuusnaano waligeen oo aan lumin xakameyna nolosheena. Waa muhiim inaan gaarno himilooyinkeena iyo hamigeenna. Waa muhiim in la qibro oo furnaado isku day la sameeyo waxyaabo cusub si markaas aan si sax ah u garan karno hamigeena oo aan u dhisi karno riyooyinkeenna.
Waxaa jiri doona caqabado inta lagu gudajiro, laakiin waa annaga oo ah inaan xasuusno inaan u baahan nahay inaan kufinno riyooyinkeenna. Tani waxay kuu horseedi doontaa nolol lagu qanco oo waxay xaqiijin doontaa inaan ku hogaamino nolol midho dhal leh.
Waxaa jiri doona dad kaladuwan oo u dhaqmi doona sidii annaga saameyn nagu yeelan lahayd. Laakiin waa inaanan u oggolaan inay saamayntaas isu rogto oo aan u siino awood ay ku hagto nolosheena. Waxaad u maleyn kartaa inuu qofkaasi yahay midka aad u fiican. Waxay noqon kartaa run sidoo kale. Laakiin luminta xakameynta noloshaada waxay kaa dhigeysaa inaad sameyso waxyaabo sida qof kale sameyn lahaa.
Waxaad lumineysaa shaqsiyankaaga iyo awoodaada inaad naftaada wax u qabato. Waxaad noqotaa mid ku tiirsan oo aad dareentid lumitaan marka aad kaligaa tahay. Sidaa darteed, waa muhiim in dadka kale la dhiiri geliyo laakiin ay si buuxda gacanta ugu hayaan nafteena.
Qalinka si loo qoro sheekada noloshaada gacantaada ayaa ku jirta oo waad u tusi kartaa si madaxbanaan. Waad qaldami kartaa, laakiin khaladka ma dareemi doontid inaadan isku hallayn naftaada maxaa yeelay adigu adigu waad ku sameysay kaligaa. Waad ka baran doontaa halkaas, uga sii gudubbi doontaa oo aad ku guuleysan doontaa guul, dhammaantoodna waa qof isku kalsoon.
Xigasho qoraal ah oo dhiirigalin leh
Fikrado Wanaagsan oo Ku Saabsan Nolosha
Xigashooyinka ku saabsan Akhriska iyo Qoraalka
Xigasho sheeko kusaabsan nolosha